दुनियाकै सबैभन्दा सुन्दर मानिने क्लियोपेट्रा जति सुन्दर थिईन् त्यति नै चतुर र षड्यन्त्रकारी!! – News Nepali Dainik
दुनियाकै सबैभन्दा सुन्दर मानिने क्लियोपेट्रा जति सुन्दर थिईन् त्यति नै चतुर र षड्यन्त्रकारी!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २८, २०७७ समय: १३:३८:२०
इतिहासका धेरै रानी आफ्नो सुन्दरताको लागि निकै प्रसिद्ध छन्। आफ्नो सुन्दरता कायम राख्न यी रानी अनेक प्रकारका अजीब काम गर्ने गर्थे। तपाईंले पानीले, गाई-भैंसीको दुधले नुहाएको त सुन्नु भएको होला। तर के तपाईंलाई थाहा छ कि दुनियामा एक यस्ती रानी पनि थिईन् जो आफ्नो सुन्दरता कायम राख्नको लागि गधाको दुधले नुहाउने गर्थिन्। यसको लागि उनी दैनिक ७०० गधाको दुध मगाउने गर्थिन्। यी रानीलाई सुन्दरताको लागि मात्र नभएर रहस्यमय जिन्दगीको लागि पनि जानिन्छ।
इजिपशियन राजकुमारी क्लियोपेट्रालाई सुन्दरताको देवी पनि भनिन्थ्यो। क्लियोपेट्रा केवल उनको सुन्दरताको लागि मात्र परिचित नभएर उनको जीवन पनि धेरै रहस्यमय थियो। जसले अझै पनि अन्वेषकहरूलाई आकर्षित गर्छ। क्लियोपेट्रा जति सुन्दर थिईन् त्यति नै चतुर र षड्यन्त्रकारी थिईन्।
आफ्नो बुबाको मृ-त्यु’पछि १४ वर्षको उमेरकी क्लियोपेट्रा र उनका भाइ टोलेमी डियोनिससले संयुक्त रूपमा राज्य पाए। तर टोलेमीलाई राज्यमा क्लियोपेट्राको शक्ति सहन भएन र विद्रोह गरे। क्लियोपेट्राले आफ्नो शक्ति गुमाईन् र सिरियामा शरण लिईन्। पछि क्लियोपेट्राले रोमका शासक जुलियस सीजरलाई आफ्नो मोहमा फसाएर मिस्रमा आक्रमण गर्न लगाईन्। सीजरले टोलेमीलाई मारे र क्लियोपेट्रालाई इजिप्टको सिंहासनमा बसाए।
भनिन्छ कि क्लियोपेट्रा यति सुन्दर थिइन कि उनी आफ्नो सुन्दरताको जालमा राजाहरू र सैनिक अधिकारीहरूलाई फसाएर आफ्ना सबै कामहरू उनीहरूबाट गराउथिन्। उनीसँग संसारका १२ भन्दा बढी भाषाहरुको ज्ञान थियो। यहि कारण उनी अरुसँग छिट्टै घुलमिल हुन्थिन् र उनहरुको सबै गोप्य कुरा जान्थिन्।
क्लियोपेट्रा सुन्दर देखिनको लागि दिनहुँ ७०० गधाको दुध मगाएर उक्त दुधमा नुहाउने गर्थिन्, जसले उनको छाला सधैं सुन्दर राख्थिन्।
Last Updated on: February 10th, 2021 at 1:42 pm